WordPress 3.3 Yimid | Martech Zone
WordPress 3.3 Yimid
Talaado, Disembar 13, 2011 Talaado, Disembar 13, 2011 Douglas Karr
WordPress 3.3 ayaa timid! Isticmaalka isku xirnaanta maamulka waa horumar. Markii WordPress uu furay liis garaynta, waxay umuuqatay in kastoo horumariyayaal kasta oo meesha jooga ay go'aansadeen inay sameeyaan menu cusub. Tani waxay ka dhigtay nidaamka menu-ka ee WordPress wax aad looga xumaado. Qaabka cusub ee loo yaqaan "mouseover menu" ayaa ka dhigaya mid aad uga fudud in la dhex maro oo la helo waxaad u baahan tahay. Isku xirka Maamulka wuxuu hadda si fiican ugu shaqeeyaa kiniiniyada sidoo kale.
Hal muuqaal oo xiiso leh ayaa lagu daray API waa awooda lagu gundhig tifaftiraha qoraalka WordPress. Tani waxay u fureysaa fursad horumariyaashu inay dhexgalaan bogaggooda maamul iyo tifaftireyaasha. Tifatiraha laftiisa ayaa loo hagaajiyay si loogu daro isjiid jiid iyo dhibic, ogolaanaya in faylal badan lagu rido!
Waxay u egtahay koritaanka Tumblr sidoo kale madaxa ayuu u rogayaa WordPress… soo dejiyaha Tumblr hadda waa nool yahay :). WordPress ayaa dhajiyay liistada dhammaan hagaajinta WordPress 3.3 boggeeda.
Martech Hadda waxaa laga heli karaa Google Currents
OpenCart: Furan Ecommerce